ललितपुर महानगरमा माओवादीलाई कांग्रेसको धोका, उपमेयर उम्मेदवार नै नभएको कांग्रेसको रुखमा ३११ मत – Nepal Views
एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उपमेयरमा ४२० मत ल्याएकी छन्, जबकि गठबन्धनबाट उपमेयर उठेका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बाबुराज बज्राचार्यले जम्मा १६७ मत मात्र पाएका छन्।
काठमाडौं। ललितपुर महानगरपालिकामा नेकपा (माओवादीकेन्द्र) माथि नेपाली कांग्रेसबाट गम्भीर अन्तर्घात भएको छ। उक्त वडामा कांग्रेसका मतदाताले माओवादीका उपमेयर उम्मेद्वार बाबुराझ बज्राचार्यलाई भोट नदिई उम्मेद्वार नै नभएको रुख चिन्हमा मत दिएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, वडा नम्बर १ को मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले उपमेयर नउठाएको उक्त महानगरमा रुख चिह्नमा ३११ मत परेको हो। जसको भ्यालू बदर मत बराबर नै हुने छ।
उक्त वडाबाट वडाध्यक्षमा ६६१ मत ल्याएर स्वतन्त्र उमेदवार निर्मल तण्डुकार निर्वाचित भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका ध्रुवलाल तण्डुकारलाई २३६ मतान्तरले जितेका छन्। तण्डुकारले ४२५ मत ल्याएका छन्।
उक्त वडाबाट एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उपमेयरमा ४२० मत ल्याएकी छन् जबकि गठबन्धनबाट उपमेयर उठेका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बाबुराज बज्राचार्यले जम्मा १६७ मत मात्र पाएका छन्।
ललितपुरको मेयरमा चिरिबाबु महर्जन एमालेसँग फराकिलो अन्तरले अघि छन्। उनले ८७७ मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेदवारले ४०२ मत पाएका छन्। एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार मेयरको उम्मेदवार छन्। मेयरमा उम्मेदवारी नदिएको माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्मा १० मत परेको छ।
उक्त वडा ललितपुरको कुपण्डोलभन्दा पश्चिम वागमती कोरीडोरसँगको क्षेत्र हो। तीन खम्बाबाट दक्षिण रुपक स्कुल हुदै प्रदिप रिमालको अगाडिबाट पूर्व हुदै सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदनबाट दक्षिण पुरानो सगरमाथा एफ. एम. अगाडि बाट पश्चिम हुदै वडा नं. १० र २ को सिमानाबाट उत्तर हुदै वागमती कोरीडोर शंकटा पुलसम्म उक्त वडा फैलिएको छ।
१ जेठ २०७९ ११:०१